DR GAAS OO HUB KA GADANAYA SUUQA HUBKA ETHO IYADOO LA IS WAYDOINAYO INUU XUDUUDAHA SOO XODHAYO & INUU MAGALOYINKA MAJEERTEN ALSHABAAB KAGA WARDIYEYNDOONO?
a Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo hawlo shaqo u joogaa magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia ayaa maanta 19-April-2016 waxa uu kormeer ku tegey warshadda hubka, Rasaasta, Gawaadhida dagaalka iyo kuwa raaxada ee dalka Ethiopia ee lagu magcaabo METEC IYO GAFAT.
Kormeerka ayaa Madaxweynaha waxaa ku wehelinayey Wasiirka Ganacsiga iyo Warsha dawladda Puntland Cabdiweli Xirsi Cabdulle, wakiilka Puntland ee Ethiopia Mahad Faarax Gaas iyo saraakiil ka tirsan Madaxtooyada dawladda Puntland oo kamid ahaa waftigii Madaxweynaha.
Madaxweynaha ayaa marii uu soo gaadhey warshadda waxaa kusoo dhoweeyey masuuliyiin sarsare oo katirsan maamulka warshadda iyo saraakiil ka tirsan Wasaaradda gaashaan dhigga dalkaasi, waxaana uu kala hadlay Madaxweynuhu masuuliyiintaasi sidii Puntland ay uga faa’iidaysan lahayd wax soo saarka warshaddaasi.
Dhinaca kale guddoomiye ku-xigeenka Baarlamaanka Dawladda Federaalka Ethiopia Dr. Rashiid ayaa qado sharaf soo dhoweyn ah u sameeyey Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, waxaana qado sharafta kadib ay wada qaateen kulan is xog-waraysi guud ah.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali waxa uu dedaal xoogle ugu jiraa sidii is bedel mug leh loogu samayn lahaa horumarinta siyaasadda dibad, koboca dhaqaalaha iyo dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha oo ah halbowlaha dhaqaalaha ee Puntland iyo qaabkii ay Puntland xiriiro ganacsi ula yeelan lahayd waddamada caalamka.
Wiil Somaaliyeed oo Tacdi aad u xun logeeystay isogoo Dalbanaya cadaalad iyo in xaqiisa lasiiyo
Warbixintan ayaa ah mid Jornalizem ka heshay Wiil somali ah oo kusugan Somaliya gaar ahaan Boosaaso oo aan jeclaanay inaan soo gudbino Dalabkiisa uu noo soo qortay
Asc : waxaan umada soomaaliyed u sheegayaa in aan ahay wiil soomaaliyeed oo tacadiya farabadan loo gaystay waxaana aan ku noolahay magalada boosaaso waxaana laygu sameeyay xad gudub, Xad gudub kaas ayaa waxa uu ahaa, mid bini aadan nimada ka baxsan waxaana gaystay dad soomaaliyeed.
Waxayna laygu sameeyeen. in ay bur buriyaan xubin kamid ah xubnahayga taran ka oo waliba loo adeegsaday qalab bir ah oo wax bur buriya oo waliba si arxan darra ah laygu gaystay, xad gudub kaas waa war xaqiiqa ah meesha falku ka dhacay waa magaalada muqdisho hada waxa uu ku nool yahay magaalada boosaaso .waxaan umada somaliyed usheegayaa in ay ogaadaan falkaas cidda ka danbeysay iyo cida gaysatay .waxaana aan codsanayaa baaritaan caalamiyah oo aysameeyaan maxkamada puntland iyo maxkamada sare ee soomaaliya .
tell number waa Golis = 7706907 Somtel = 066206080
waxaana falkaas ka danbeeyay ragas iyo ragkale oo soomaaliyeed
1 JANARAAL: MAXAMED CALI SAMATAR
2 JANARAAL : MAXAMUD MUUSE XIRSI CADDE
3 MADAXWAYNE : CALI MAHDI MAXAMED
Waxaan latiig sanayaa maxkamahadaha puntland
iyo Maxkamadaha soomaaliyeed iyo maxkamadaha caalamka ee heeg . ku gudoomiye ku xigeenka heeg
Xukuumadda Kenya oo Qunsuliyado ka furanaysa dhowr Magaalo oo ku mid ah kuwa Soomaaliya
Dowlado dhowr ah oo Soomaaliya saaxiibbo dhaw kala ah dhanka wada-shaqeynta, ayaa Magaalada Muqdisho ka sameystay Qunsuliyado ay ku shaqeeyaan iyagoo badi ugu adeegayo Muwaadiniintooda iyo Shacabka Soomaaliyeed ee danta ka gasho safaaradda. Waxaa jiro Dowladdo u baratamayo in Soomaaliya ay ka sameystaan Safaarado loogu adeego Muwaadiniintooda jooga dalka Soomaaliya.
Dowladda Kenya ayaa sheegtay in bisha July ee Sannadkaan ay Qunsuliyado ka furanayso Magaalooyinka Kismaayo, Garoowe, Baydhabo iyo Hargeysa. Warkaan waxaa shaaciyay safiirka Kenya u fadhiya Muqdisho culus tumbo oo wareysi siiyay wargeyska The Star.
Sidoo kale, Danjire Tumbo wuxuu sheegay in Qunsuliyadahan ay noqon doonaan kuwa loogu adeego muwaadiniinta Kenya ee ku nool gudaha Soomaaliya kuwaasoo tiradooda uu ku sheegay 20-kun kana shaqeeyaan meelo kala duwan oo Muqdisho ah.
Wuxuu sheegay in Xaaladda Amni ee Soomaaliya ay soo hagaagayso, isagoo ugu baaqay muwaadiniinta Kenya inay yimaadan Soomaaliya si ay uga faa’iideystaan fursadaha ka jira ee dhanka shaqooyinka ah.
Ugu dambeyn, Dalka Soomaaliya waxaa la sheegaa inay ku sugan yihiin shaqaale badan oo u dhashay Dalka Kenya, kuwaasoo ka shaqeeya Hay’adaha Samafalka, hoteellada iyo dhismayaal kale, balse dal ay muwaadiniintiisa qeyb ahaan ay shaqo la’yihiin ayaa muwaadiniin kale loogu wacayaa inay ka shaqeystaan.
Maamulka KMG Koonfur-galbeed oo beenisay in Jannaale ay Saldhigyo ku leedahay Kooxda ISIS
Taliyaha Nabad-sugidda Maamulka Koonfur-galbeed ee Soomaaliya ayaa beeniyay in Deegaanka Jannaale ee Gobolka Shabeellada Hoose ay ku yaallaan saldhigyo ay leedahay kooxda Daacish/ISIS, xilli dowladda Somalia ay sheegtay inay burburisay saldhigyo ay kooxdaasi ku lahayd Koonfurta Soomaaliya.
Saraakiisha Koonfur-galbeed, ayaa xusay inaysan xog-ogaal u ahayn joogitaanka Daacish iyo Weerarka ay Dowladdu Federaalka Soomaaliya sheegtay in ay Saldhigyo ay lahayd Kooxdan ku burburisay.
Wakaaladda Wararka Soomaaliya ee SONNA ayaa baahisay in ciidanka Komaandoosta Somalia ay burburiyeen saldhigyo kooxda la baxday Khilaafada Islaamka ee ISIS ay ku lahayd Somalia, xili lagu qaaday weeararo qorsheysan.
Taliyaha Nabad-sugidda Koonfur-galbeed Soomaaliya, Cali C/llaahi Isxaaq oo la hadlay Warbaahinta ayaa yiri. “Anagu Waxaan og-nahay oo kaliya in Al-shabaab ay halkaas ku sugan tahay, marna ma ogin in kooxda Daacish ay ku sugan yihiin, sidoo kale weerarka ay Dowladda Somalia sheegtay inay ku burburisay saldhigyada Daacish ay deegaanka Janaale ku lahayd,” ayuu yiri Cali Isxaaq.
Dhinaca kale, Taliyuhu wuxuu xusay inaysan jirin xal-waara oo laga gaari karo dagaallada kusoo noq-noqda gobolka, inta siyaasadda laamaha dowladda dhexe iyo AMISOM qaybta uga sugan gobolka lagala tashanayo.
Ugu dambeyntii, Gobolka Shabeellada Dhexe oo la Daala-dhacayo Dagaal beeleedyo, ayaa haddan waxaa soo if-baxayo Warar maamulka Koonfur-galbeed aysan ogeyn oo ku aaddan inay saldhigyo ku leeyihiin kooxda Khilaafada Islaamka la baxday.
Wasiirka arrimaha dibada Soomaaliya oo ka hadlay gabar Soomaali ah oo is gubtay
Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya C/salaan Cumar Hadliye ayaa sheegay inay dowladda Soomaaliya la socoto gabar 21 jir Soomaali ah oo isku gubtay xero qaxooti ku taal Jaziirada Nauro oo ku dhow Australia.
Gabadhan oo lagu magacaabo Hodon Axmed Barre ayaa horay looga soo celiyay Australia, iyadoo dowladda Australia ay sharci adag ka soo saartay qaxootiga.
“Waa la soconaa gabar 21 jir ah oo is gubtay, si ay u tusto dareenka dadka Soomaaliyeed iyo dadka kale ee qaxootiga ee dhegaha laga xirtay, dowladda Soomaaliya waa la socotaa in Australia ay diiday in qaxooti dalkeeda soo galaan”ayuu yiri Wasiir Hadliye.
Mr Hadliye ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay ku dadaaleyso sidii xaalada dalka loo hagaajin lahaa, isagoo xusay in aanay dalalka caalamka ka qarsooneyn xaalada dalka uu ku sugan yahay.
Qaxootiga ku nool Jasiiradan ayaa waxa ay ka kala yimaadeen dalal badan oo caalamka, iyadoo dad gaaraya afartameeyo oo isugu jira lab iyo dheddig ay ku jiraan xeryaha, dadkan ayaa doonayay inay galaan dalka Australia hase yeeshee dowlada Australia ayaa geysa dadka qaxootiga ah jasiiradan.
Baarlamaanka Soomaaliya oo maanta guda-galay doodda ku saabsan hanaanka doorashada dalka
Mudanayaasha baarlamaanka federaalka ayaa maanta gudda-galay dooda ku aadan hanaanka doorashooyinka dalka ka dhacaya, kadib markii 30-kii bishii hore ee April uu u horkeenay Ra’iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid.
Kulankan ayaa waxaa ka hadlay Xildhibaano dhowr ah, kuwaasoo is qoray, markii Guddoonka Baarlamaanka uu ku dhawaaqay ajandaha dooda inuu yahay hanaanka doorashooyinka.
Xildhibaanada ka doodayay heshiiska hanaanka doorashooyinka ayaa ahaa kuwo kala aragti duwanaa, waxaana qaar ka mid ah Xildhibaanada ay qabeen in Guddi loo saaro qodobada ku xusan heshiiskan, isla markaana wixii qaladaad ah la saxo, kadibna cod loo qaado.
Sidoo kale Xildhibaano kale ayaa qabay in Xukuumadda dib loogu celiyo qorshahan guud ee hanaanka doorashooyinka, si ay u soo jadwaleyso taariikha la soo xulayo Labada aqal ee Baarlamaan, doorashada Guddoonka iyo doorashada Madaxweynaha.
Xildhibaano kale ayaa iyana soo jeediyay in Baarlamaanka ansixiyo hanaanka doorashooyinka, maadaama waqtiga haray uu yar yahay, isla markaana la rajeynayo in bisha Agosto ay doorasho dalka ka dhacdo.
Intaas kadib Guddoonka Baarlamaanka ayaa amray in maalita berri la isugu soo laabto, si Xildhibaanada haray ay uga doodaan, waxaana marka la soo gaba gabeeyo dooda la filayaa in Guddoonka cod u qaado labo mid oo kala ah in Xukuumadda dib loogu celiyo ama qodobada la saxo, lana ansixiyo.
Dhinaca kale waxaa kulanka ka baaqda Ra’iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid, waxaana qorshuhu ahaa in su’aalo laga weydiiyo, lamana sheegin waqtiga uu hor imaanayo, si uu uga jawaabo su’aalaha.